Sheegidda: "Sida doorashooyinka dalka reer binu Israa'iil, laakiin dawladdu ma waxaa la aasaasay dhow imaatinka Masiixa" | Apg29
Siday tahay xaaladda hadda ee Israa'iil.
laama Newspaper ee Yitzhak Kaduri.
Waa markii ugu horeysay ee taariikhda Israa'iil ee ah in uu awoodi waayay inuu soo dhiso xukuumad ah. Waxaa intaa dheer, image ah in reer binu Israa'iil lahaa sanadkan labo doorasho, laakiin waxa ay keentay in dowladda.
wax sii sheegidda 40-sano jir ah
Waxaa jira wax sii sheegidda oo ah 40-sano jir ah in hadda la xiriirin karaa in xaaladda hadda ka jirta Israa'iil.
sheegidda ka imanaysaa Rabbi Yitzhak Kaduri ahaa sawir nin cajiib ah eeg xagga sare. Ma aha oo kaliya sababtoo ah markuu dhintay sanadkii 2006, wuxuu ahaa 108 sano.
Wuxuu ahaa sharaf badan, bartay iyo jeclaaday macalin dad badan oo Yuhuud ah. Taasi waxay ahayd kiiska, waxay siinaysaa tirada wanaagsan oo kuwii la socday uu la aasayay ayaa waxaa soo raaca oo ku saabsan 300,000 oo Yeruusaalem la daboolay by boodhadhka in naadiyey barooranayay xilli dambe Rabbi Yitzhak Kaduri.
Uu qaab nololeed ahayd mid aad u fudud. Waxa uu ku noolaa nolol saboolnimo, uu yar cunay, ka hadlay iyo dhif hadlay. Iyadoo ay taasi jirto, waxa uu ku guuleystay badan dhegaha dadka, markii uu sameeyaa wax.
wax sii sheegidda
Waxa uu dhif ah ka hadlay, laakiin marka uu ku sameeyey waxaa la hoos ku qoran waxa uu sheegay. 40 sano ka hor, waxay weyddiiyeen siduu Masiixa waxaa loo arkaa in ay siyaasadda ku ool ah oo reer binu Israa'iil, ama waxa halkaas ku soo arkay? Jawaabtiisa gaaban ahaa:
"Sida doorashooyinka dalka reer binu Israa'iil, laakiin dawladdu ma waxaa la aasaasay dhow imaatinka Masiixa."
Siday tahay xaaladda hadda ee Israa'iil. Waa markii ugu horeysay ee taariikhda Israa'iil ee ah in uu awoodi waayay inuu soo dhiso xukuumad ah. Waxaa intaa dheer, image ah in reer binu Israa'iil lahaa sanadkan labo doorasho, laakiin waxa ay keentay in dowladda.
Dabcan, wax sii sheegiddii oo dhan baaro laakiin waa in aan la quudhsan, waxa ay sheegtay in this aayadda gaaban:
"Ha waxay quudhsadaan waxsii." 1 Th. 5:20.
Runtii waa waqti in ay ogaadaan in Ciise iman karaan waqti kasta! Waxaan ma noqon karaan aamusan in this sii sheegidda cajiib ah. Haddaba waxaa halkii ay mas'uul ka ah qofka akhrinaya fariinta sida ay u fal.
Qaar badan oo diidi doona tan iyo isku difaacaan ka soo hor jeedda. Dhammaan noocyada kala duwan ee doodaha ka dhanka this hubaal iman doonaa.
Waa in arrintan diinta kiristaanka ee Iswiidhan la'aan weyn oo waxgarasho koorsada nebiyada ee dhacdooyinka dhow dahay, sababta ma hadlaan Ciise laabto.
anoo addoonkiisa ah shar The
Ciise ayaa saadaaliyay in halkii ay leeyihiin dabeecad badan oo taban dhinaca fariinta soo laabashada Ciise iyo ayaa aaminsan in tani ay hadda ku dhici karaa. Tani waa khatar ah, waayo, Ciise calls oo ah addoonkii xun sida!
"Laakiin haddii addoonkaas sharka leh iyo isyidhaahdaa, Sayidkaygu waa raagay". Matt. 24:48.
Halkan waxa aad naftaada isku dayi kartaa in la xiriirta erayadan Ciise haddii ay tahay waxa Markaasaa Ciise ku yidhi, anoo addoonkiisa ah shar ah.
Ma aha in garsooruhu
Ma aha waxaan kuwaas oo ku andacooday in Ciise la'aan. Tani ma aha qoraal ah inuu xukumo addoonkii Rabbiga oo aan mar kale jacayl isku dayaya in ay keenaan mas'uuliyadda iyo kursiga.
ma Waxaad u badbaadi ama ku noolaadaan nolol been ah, si xor ah u nala soo xiriir nala si aan u wada at. Waxaa hadda maahan in ay riixaan on in ay qaadan talaabooyin muhim ah, waxa had iyo jeer soo daahay noqon kartaa!